प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस मिश्रको नाममा उजुरीको चाङ्ग, के के परे उजुरी ? — Motivatenews.Com
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस मिश्रको नाममा उजुरीको चाङ्ग, के के परे उजुरी ?
भदौ २०, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका ओमप्रकाश मिश्रको नाममा संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी को चाङ्ग लागेको छ ।आज अन्तिम समयसम्म उनलाई अनुमोदन गर्न नहुने दाबीसहित करिब आधा दर्जन उजुरी दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
मिश्रमाथि एनसेलको कर छुटदेखि हाँडीगाउँको जग्गासम्मको उजुरी परेको स्रोतले जनाएको छ। यसअघि सिफारिस भएका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम सुनुवाइ समितिबाट अस्विकृत भएपछि परिषद्‌ले भदौ ७ गते मिश्रको नाम सिफारिस गरेको थियो।
संवैधानिक परिषदको सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उजुरी आह्वान गरेको थियो। उक्त उजुरीमाथि २२ गतेदेखि सुनुवाइ समितिले अध्ययन गर्दै छ।
सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेका मध्ये पनि रोल क्रमका आधारले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश छान्ने चलन यस पटक तोडिएको थियो। यसअघि सिफारिस गरिएका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्विकृत भएपछि ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर राणा योग्यता पुगेको भित्र परेका थिए। त्यसमध्ये पहिलो रोजाइमा मिश्रको सिफारिस भई सुनुवाइ हुँदैछ।
विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारको मुद्दामा कठोर मापदण्ड अवलम्बन गर्दै चर्चामा आएका मिश्र २०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्चका स्थायी न्यायाधीश भएका थिए। मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएमा कार्यकाल जम्मा ५ महिनाको मात्रै हुनेछ। १८ पुसमा मिश्रले अवकाश पाएपछि अर्का न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका लागि बाटो खुल्नेछ।